उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम जोङ् इलको निधन “उत्तर कोरियाभर रुवाबासी” | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← पाँच बर्षीया नावालिका बलात्कार गर्नेलाई चौध बर्ष कैद
इराकमा NRNA-NCC तदर्थ समितिको गठन →
उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम जोङ् इलको निधन “उत्तर कोरियाभर रुवाबासी”
Posted on 19/12/2011 by जय आले | १ टिप्पणी
४ पुस । कट्टर कम्युनिष्ट मुलुक उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता एवं राष्ट्रपति किम जोङ् इलको निधन भएको छ । उत्तर कोरियली सरकारी टेलिभिजनले नेता किमको ६९ वर्षको उमेरमा राजधानी प्योङयाङ बाहिर यात्राका क्रममा निधन भएको जानकारी दिएको छ ।
कालो पोसाक लगाएका टेलिभिजन प्रस्तोताले रुँदै किमको निधन भएको घोषणा गरेका थिए । अत्याधिक शारिरीक एवं मानिसिक कार्य गरेका कारण उहाँको निधन भएको टेलिभिजनले जनाएको छ । किमको निधनपछि उत्तर कोरिया शोकमा डुबेको छ । त्यहाँ १३ दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिएको छ ।
१९९४ मा आफ्ना पिताको निधनपछि किमले उत्तर कोरियाको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको भएको थियो । उहाँ सन् २००८ देखि मुटुको रोगबाट पिडित हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि उहाँ केही महिनासम्म सार्वजनिक समारोहहरुमा समेत सहभागी हुनु भएको थिएन । किमको २८ डिसेम्बरमा राजधानी प्योङयाङमा अन्तिम संस्कार गरिने बताइएको छ ।
उहाँको उत्तराधिकारीका रुपमा २० वर्षिय छोरा किम जोङ वूनलाई हेरिएको बीबीसीले जनाएको छ । उनले आफूलाई समर्थन गर्न देशबासीलाई अपिल गरेका छन् । उत्तर कोरियाली सरकारी समाचार एजेन्सी केसीएनएले भनेको छ- ’सबै पार्टी सदस्य, सैनिक र आम जनता कमरेड किम जोन वूनलाई एक विश्वासीका रुपमा समर्थन गर्नुपर्छ । उनले पार्टी, सेना र जनताको सुरक्षा गर्नुपर्छ र मजबुत बनाउनु पर्छ ।’
उत्तर कोरियाको सबैभन्दा घनिष्ट सम्वन्ध भएको देश चीनले किमको निधनति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले किमको निधनमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै यस दुःखद घडीमा चीन सरकार कोरियाली जनताको साथमा रहेको बताएका छन् ।
किमको निधनसँगै दक्षिण कोरियाले आफ्नो सेनालाई अलर्टमा राखेको छ भने जापानले आपत ब्यबस्थापन टीम बनाएको छ । किमको निधनमा समवेदना व्यक्त गर्दै अमेरिकाले आफू दक्षिण कोरिया र जापानको सम्पर्कमा रहेको बताएको छ । यस्तै बेलायती विदेशमन्त्री विलियम हेगले उत्तर कोरियाली नेतृत्व युवा नेतृत्वका साथ आम नागरिकको हितका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग राम्रो सम्वन्ध बनाउने ऐतिहासिक मौका रहेको बताउनु भएको छ ।
को थिए किम ?
डिएर लिडर -प्यारा नेता)को नामले चिनिने उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ इल संसारकै सबैभन्दा रहस्यमय व्यक्तित्व भएका नेता मानिनु हुन्छ । पिता किम इल सुंगको निधनपछि सन् १९९४ मा उत्तर कोरियाको सत्तामा आएका किम एक शक्तिशाली कम्युनिष्ट नेताको रुपमा विश्वचर्चित हुनुहुन्छ । दक्षिण कोरियाली मिडियाहरुले उहाँलाई एक घमण्डी, आडम्बर प्लेब्वाइको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेपनि दुनियाँका सबै शासकहरुले किमको व्यक्तित्वको प्रसंसा गर्ने गरेका छन् । भलै उत्तर कोरियाको मानवअधिकार र अप्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको आलोचना हुँदै आएको छ ।
जन्म नै रहस्यमय
किम जोङ इल सन् १९४२ मा उत्तर कोरियाको पेक्दु इलाकामा जन्मिनु भएको हो । तर, कतिपयले उहाँ सन् १९४१ मा साइबेरियामा जन्मिएका भनेर पनि भन्ने गरेका छन । उहाँ काठको कोठाभित्र जन्मिँदा बाहिर आकाशमा चम्किला तारा देखिनुका साथै इन्द्रेणी समेत परेको बताइन्छ । त्यसैले उहाँलाई चमत्कारिक व्यक्तित्वको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । उहाँले २ वर्षको उमेरमा ६ वटा ओपेरा लेखेको बताइन्छ ।
होँचा कदका किम अग्लो देखिनका लागि प्लेटफर्मवाला जुता लगाउने गर्नुहुन्थ्यो । खानपिनमा शौखिन पनि मानिन्छ उहाँलाई । किमसँग रुसमा सँगै रेलयात्रा गरेका रुसी दुत कस्टेटिन पुलिकोवस्कीका अनुसार यात्राका क्रममा उहाँले जिउँदा झिँगेमाछा मगाएर चाँदीको चपस्टिकले खाने गर्नुहुन्थ्यो । किम महिला साथीहरुसँग मदिरा पान पनि गर्नुहुन्थ्यो । सन् २००० मा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति किम दाय जुंगसँगको शिखर वार्ताका दौरान उहाँले १० गिलास मदिरा पिएको प्रसँग पनि निकै चर्चित छ ।
सन् १९७८ मा किमले दक्षिण कोरियाली फिल्म निर्देशक शिन सांग ओक र उनकी पत्नी चोइ युन ही लाई अपहरण गर्ने आदेश दिनु भएको थियो । उनीहरुलाई पाँच वर्षसम्म अलग अलग राखियो र त्यसपछि एक समारोहका बीच पुनर्मिलन गराइयो । फिल्म निर्देशक दम्पतीका अनुसार त्यसक्रममा किमले अपहरणका लागि माफी माग्दै आफ्नो लागि पनि फिल्म बनाइदिन आग्रह गर्नु भएको थियो । आग्रह बमोजिम उनीहरुले ७ वटा फिल्म बनाइदिए र सन् १९८६ मा भाग्न सफल भए । उहाँ यति फिल्मप्रेमी हुनुहुन्थ्यो की उहाँको पुस्तकालयमा २० हजार वटा हलिउड फिल्मका चक्का थिए । उहाँले फिल्मसम्बन्धि किताब समेत लेख्नु भएको थियो । उहाँलाई हलिउड अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर खुबै मन पर्थ्यो । उहाँकै प्रयासमा उत्तर कोरियाको फिल्म कम्पनीले उत्तर कोरियाको इतिहास’bout एक सय भागको धारावाहिक श्रृंखला बनाएको थियो ।
सन् १९७५ मा प्रिय नेताको उपाधि पाएका किम सन् १९८० मा कोरियन वर्कर्स पार्टीको केन्द्रिय समितिमा चयन भई संस्कृति तथा कला विभाग सम्हाल्नु भयो । सन् १९८७ मा एक दक्षिण कोरियाली विमानलाई खसाल्नको लागि उहाँले निर्देशन दिएको विश्वास गरिन्छ । सन् १९९१ मा किम जोङ इल कोरियन पिपुल्स आर्मीका सर्वोच्च नेता चुनिनुभयो । सन् १९९४ मा पिता किम इल सुङको निधनपछि उहाँले उत्तर कोरियाको सत्ता सम्हानु भएको हो । त्यतिबेला उत्तर कोरिया गहिरो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको थियो । वैदेशिक व्यापार धरासायी थियो भने प्राकृतिक प्रकोप र भोकमारीबाट लाखौँ मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । सत्तामा आएपछि उहाँले अन्तराष्ट्रिय समुदाय खासगरी चीनसँग सहयोगको अपिल गर्नुभयो र सहयोग जुटाएर देशको संकट केही मात्रमा भएपनि निवारण गर्न सफल हुनुभयो । किम चीनमा साम्यवादी सिद्धान्तको सरकारका बाबजुत बजार अर्थतन्त्रको सफल प्रयोगका विषयमा जान्न निकै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो र पटकपटक यसै विषयमा बुझ्न चीन जाने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले सन् २००१ पछि उत्तर कोरियामा बजार अर्थतन्त्रको प्रयोग स्वरुप निजि उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिनुभयो । दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्ध सुधारका लागि समेत उहाँले केही प्रयास गर्नुभयो र उहाँकै प्रयासमा सन् २००० मा दक्षिण कोरियासँग शिखर वार्ता भयो, जुन सन् १९५३ को युद्धपछिको पहिलो वार्ता थियो । यो वार्ताले युद्धबाट बिछोडिएका परिवारको पुनर्मिलन लगायत अरु सम्बन्ध सुधारका विषयमा पनि सफलता प्राप्त गर्‍यो ।
किमका विषयमा फैलिएका अफवाहहरु
सन् २००८ को अगष्टमा जापानको एक पत्रिकाले किमको सन् २००३ मै मृत्यु भएको कुरा छापेको थियो । त्यसको एक महिनापछि जब देशको ६० औँ स्थापना दिवसका अवसरमा किम उपस्थित नभएपछि अमेरिकाले उनको हृदयाघात भएको र मृत्यु भएको हुनसक्ने बताएको थियो । तर यस्ता अफवाहका बाबजुत सन् २००९ को अप्रिलमा उत्तर कोरिया सरकारले एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै सन् २००८ को नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनामा किमले देशका उद्योगहरु भ्रमण गरेको दाबी गर्‍यो । सन् २००९ मा दुई अमेरिकी पत्रकारलाई मुक्त गराउने प्रयासका लागि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिन्टन उत्तर कोरिया पुगेको बेला किम नाटकीय रुपमा सार्वजनिक हुनुभयो र उहाँका ’boutमा चलेका अफवाह गलत सावित भए । त्यतिबेला किम र क्लिन्टनबीच वार्ता भएर दुई पत्रकारलाई रिहा गर्ने सहमति भएको थियो ।
अब जुनियर किमको पालो
सन् २०१० मा किमले आफ्नो तेश्रो छोरा किम जोंग अनलाई उत्तराधिकारीको रुपमा अघि सार्नु भएको थियो । सेनाको चारतारे जनरलमा नियुक्त गरेर अनलाई कम्युनिष्ट मुलुकको भावी शासकको रुपमा प्रस्तुत गरिएको विषयले धेरैलाई आश्चर्यमा समेत पारेको थियो । धेरैले नाम नै नसुनेका अन सन १९८४ मा जन्मिनु भएको हो । किमकी कान्छी श्रीमती तथा जापानी मूलकी नर्तकी को योंग हुइको कोखबाट उहाँको जन्म भएको थियो । स्विजरल्याण्डमा औपचारिक शिक्षा लिएका अन मातृभाषासँगै अंग्रेजी र जर्मन राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्छ । उहाँ पछिल्लो समय आफ्ना बुवाका विदेश तथा आन्तरिक भ्रमणमा पनि सँगै रहने गर्नु भएको थियो ।
This entry was posted in जीबनी, विश्व समाचार. Bookmark the permalink.
One response to “उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम जोङ् इलको निधन “उत्तर कोरियाभर रुवाबासी””
ईन्द्र भूषालn | 20/12/2011 मा 1:02 बिहान |